Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo furay Imtixaan…
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed (Qadar) ayaa maanta daah furay Imtixaan sanadeedka fasalka 12-aad ee Dugsiga sare oo ay u fadhiisteen in ka badan 32-Kun oo Arday.
Mahdi Maxamed Guuleed Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in maanta daah furo Imtixaanka Dugsiga sare oo ay Ardaydu ugu gudbayaan heer jaamacadeed haddii ay helaan natiijooyin wanaagsan.
Guuleed ayaa u rajeeyay Ardayda Soomaaliyeed in natiijo wanaagsan ka helaan Imtixaanka, isaga oo kula dardaarmay in ay kordhiyaan dadaalka ay sameynayaan, si Mustaqbalka dalka wax ugu qabtaan.
Gobolka Banaadir, Dowlad Goboleedyada Hir-Shabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koofur Galbeed ayaa waqti siman iyo si isku mid ah maanta oo Sabti ah kuna beegan 18-ka July uga bilawday Imtixaanka.
Waqti ahaan waxa uu dib uga soo dhacay bishii May, sabab ka dhalatay Cudurka Covid-19, kiiskii ugu horeeyay Fayruska markii laga helay dalka waxaa la fasaxay Dugsiyada Waxbarashada Bishii Maarso.
Wasaaradda Waxbarashada XFS ayaa sheegtay in sanadkii 6-aad oo xiriir ah Ardayda Dugsiga sare ka qaadeyso Imtixaan sanadeedka, halka Ardayda kaalmaha sare gala la siiyo Deeqaha Waxbarasho ee loogu deeqo DFS.